ဘဝမှတ်တိုင်: Video Show Pro v2.4.2 App For Android March;17th;2014. Updated
Video Show Pro v2.4.2 App For Android March;17th;2014. Updated
ဒီ app လေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကတော့
​နောက်​ခံ သီချင်း ထည့်​/​ပြောင်း၊ photo slide show၊စတဲ့ features ​တော်​​တော်​ များများကို ဒီ ​ဆော့ဖ်​ဝဲ ​လေးက​နေ လုပ်​​ဆောင်​ ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
-ဒီ apk လေးကို Google Play Store မှာ
ဝယ်ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် $0.99 ပေးရမှာ
ဖြစ်ပြီး၊အခုဒီ Post လေးမှာတော့ Free အနေနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ-
-Apk File Size 9.8MB ရှိပြီး၊
-အဲ့လိုပဲ စာတမ်းအားလုံးထိုးပြီးတဲ့အချိန်​မှာ ကိုယ့်​စိတ်​ကြိုက်​ Effect ​တွေ၊ကိုယ်​လိုချင်​တဲ့ voice အသံ​တွေ၊ပြီး​တော့ ​နောက်​ခံ background သီချင်း​တွေကို ထပ်​ပြီး ​ပြောင်းလို့၊ ​ပေါင်းထည့်​လို့ရပါ​သေးတယ်​။တခြားအသုံး
ဝင်​တဲ့ လုပ်​​ဆောင်​ချက်​​တွေလည်း ပါဝင်​ထားပါ​သေးတယ်​။
1. New feature: Subtitle support various fonts
2. Lots of UI update
3. Fix video record bug on some Jelly Bean devices
1. Subtitle use more beautiful Font
2. Quickly set effects for clips
3. Fixacrash bug for video without audio track
1. Optimize free space detection
2. Fix crash bug when add music with un-mp3 format
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/19/2014 07:06:00 am